Soomaala’ayeeey! Ciiloow ba’!!!!!!
Qaybta afraad – Part4
Sidee dib-u-heshiin dhab ah lugu gaari karaa?
Intaas haddaan uga gudbo quusidda, kor sabbaynta iyo iftiiminta Aafada ina wada haysata ee 1991kii soo bilaabatay, waxaan maqaalka ku soo gunaanadayaa, sida ay ila tahay, ee looga bixi karo.
Marka hore, ereyga ‚Dib u heshiin – Reconciliation’ wuxuu muujinayaa dad ama beelo, horey heshiis u ahaa, oo colaad dhexmartay, haddana raba/ la rabo inay dib u heeshiiyaan. Arrinta Soomaaliya kasoo dhacday, gaarahaan Caasimadda, maahan mid soomaalida u gaar ah. Waddammo kale bay saman hore, mid dhexe iyo samankaanba kasoo dhacday. Waxaana looga gudbay qaab nabadeed iyo iscafin (marka qolada dulmiga gashay ay qirato) ama qaab xisaabtan iyo maxkamado, iyadoo la adeegsanayo habka ah “Who did what to whom when“ oo macnaheedu yahay „Kee baa ku kale markaas wax yeelay’. (tus, Ruanda).Waxaa la sameeyaa baaritaanno, lana keenaa markhaatiyo iyo dhibbanayaasha (victims) weli nool.
Waxaan filayaa in qaabka hore ee nabadeed uu Soomaalida la gudboon yahay.
Si dibu heshiin loo gaaro, waxaa lagama maarmaan ah in kiniiniga Nabadda (Qursun) la wada liqo – Waa haddii muslinimadu ay dhab naga tahay. Kiniiniga Nabaddu (Quraanka & Sunnada) waa daawada keliya ee markii la liqo, durbadiiba qofka soomaaliyeed uu dareemi karo culayska (ahlu qubuurta) uu xanbaarsan yahay. Dadka qaar qaac isku qarinaya ama dana kale leh baa qaba ama ku sheekeeya in arrimaha aan ka hadlayo, ay yihiin kuwo laga soo gudbay. Haddii arrimo soo dhacay mar hore aan weli laga hadlin, sabab kasta ha lahaatee, macnuhu maahan in laga soo gudbay.
Runtu waxay tahay inaan weli la biskoon. Belo iyo baas aan ahayn cudurka qabyaaladda nama hayaan! Markaad arrimaha soomaalida si fiican ugu fiirsatid, waxaa kuu soo baxaya, in wanaaggeenii iyo dadnimadeenii oo dhammi ay qabyaaladdu naafo ka dhigtay. Dhinac iyo koox walboo aad fiirisidba iyadaa hor taagan, ku dhexjirta, daba taagan ama gees cararaysa: Kooxo kala jira oo dowlad tabaryar cayrsanaya iyo kuwa la cayrsanayo oo xubnahoodu jillaafo isu dhigayo ama is turaantureynayo si qaarkood ay kooxuhu usoo gaaraan. Soomaali kasta wuxuu Safiir (Ambassador) iyo Afhayeen (Speaker) u yahay ugu yaraan 20 Ahlu qubuur ah!!! Kulan ama shir kastay yeeshaan waxay uga qayb galaan heer Safiirnimo! Safiirna go’aan iskama gaari karo haddaan dawladiisu amar siin. Soomaaligu wuxuu go’aan gaaraa isagoon amar ka helin Ahlu qubuurta – maba ka heli karee!, laakiinse aaminsan inuu wax weyn u tarayo reer Aakhiraadka!!!
Ma jiro Soomali aan daawadaan haysan: Qaar ay guryaha u taal; qaar ay jeebabka ugu jirto; qaar ay dhegaha ugu jirto; qaar gacmaha ku haysta; iyo qaar ay carrabyada u saran tahay – laakiin aan ku dhici karin inay liqaan! Hadday liqaan waxay ka takoormayaan beelahooda – Horaa loo yiri ‘Fiqi bahdii kama janna tago’. Qoladaan dambe dadweynaha ayay baraan ugana sheekeeyaan waxtarka, macaanka, khushuuca, taqwada iyo khayrka uu Kiniiniga Nabaddu leeyahay!!! Intaasiba waa naruuro. Waa Alle mahadii. Waxaa keliya oo noo haray inaan Raganimo iska raadinno oo aan Kiniiniga Nabadda wada liqno!! Haysashadiisa keliya waxba na tari mayso, haddaynaan gaarsiin qaybta dheefshiidka (digestive system). Jeerkaas keliya ayaa jirka, qalbiga, dareenka, garaadka, caqliga, aqoonta, diinta iyo akhlaaqda Soomaaligu uu isbeddel ku dhici karaa.
Waa nasiib badan yahay ruux, inta godob iyo dulmi ummadd kasoo galay mar hore weli nool. Wuxuu weli haystaa fursad uu dembigiisa ku qiran karo, cafisna ku weydiisan karo, dadkuu dembi kasoo galay iyo Allihii abuurtayba. Dembigaad Eebbe keliya ka gashid, Alle wuu kaa cafin karaa. Kaad dad ka gashidse, xisaabtiisu irridda aakhiray kugu sugaysaa.
Waxay iila ekaatay in daawa qaadashada iyo dib u heshiintu ay ka bilaabato halkii ay dulmiga iyo aafadu ka bilawdeen 1991kii, oo ah caasimadda Xamar. Intaan arrinta lugu dhaqaaqin, waa in :
• Xabbadjoojin (ugu yaraan 3 bilood ah) laga helo muqaawamada, DKMG, Amisom, Amxaarada, Mooryaanta
• Taleefan joojin laga helo warxungeeyada qurbajoogga
Keddibna lugu dhaqaaqo furitaanka wejiga koowaad.
I – Wejiga Koowaad
Shirweyne (Gogol) ay isugu wada yimaadaan Isimada dhabta ah ee dhaxalka u leh (Abtiris ahaan - genealogical) ee beelweynta Ha’da, oo ay wheliyaan waxgaradkooda iyo culimadooda oo keliya. Inaan loo yeerin qolooyinka ku qaraabta magaca beesha, sida nabadoon, oday beeled, afhayeen iyo kuwa siyaasadda hor booda.
Qodobbada gogoshuna ay ka mid noqdaan ,Matalan(tus.):
- Toos uga hadlid, falanqayn, ka garnaqsi wixii kala gaaray beelweynta wixii ka dambeeyay 1991kii.
- Dib u furid mas’aladdii hore ee la xallin kari waayay ee’ Hebel gar leh, hebelna gar leh’, si garsoor iyo go’aan looga gaaro, loogana gudbo – Illayn gari laba nin kama wada qoslisee.
- Magaca Ha’du wuxuu noqday kan keliya ee weli laga maqlo warbaahinta noocyadeeda kala duwan. Rag aan badnayn baa magacii, sharaftii, aqoontii, diintii, dhaqankii beelweynta oo dhan ‘Isbaaro’ u dhigtay. In waxgaradka beeshu raggaas istusaan, go’aan ka gaaraan, iskana qabtaan.
- Hanti maguuranta isu celin, gar iyo mag kala qaadasho.
- Is wada cafin:Haddaan si dhab ah oon qarsi lahayn looga hadlin godobta iyo dulmigii dhacay, haddee si duuduub ah, laysuguma cafin karo, laysugumana faataxayn karo, cuqdo iyo shakina bixi mayaan.
II – Wejiga Labaad
In beelweynta Ha’da oo gacmaha is wada haysata, ay gogol u dhigaan Soomaaliweyn oo dhan, intay Xamar ku casumaan isimada, culimada & waxgaradka oo idil.
Qodobbada gogoshana waxaa ka mid noqon kara, matalan(tus.):
- In beesha Ha’du qaadato mas’uuliyadda wixii Xamar kasoo dhacay. Wixii ka dambeeyay 91kii, Xamar iyaga keliya ayaa ku sugnaa, oo sheegtay. Raggii haystay ama ku dhex diriri jireyna iyaga keliya ayay ahaayeen.
- In beeshu oggolaato inay magdhow iyo xaalmarin siiso dhibbanayaasha (victims) weli nool ee soomaaliweyn oo dhan. (Fulinta arrintaan oo dhici doonta markii batroolka dalka ceegaaga la soo saro...Eebbe idankiis)
- Gartaan oo oggolaadaan in aysan jiri karin cid ama beel si gaar ah u sheegan karta caasimadda Soomaaliya.
- In beeshu raalligelin ka bixiso, cafis rasmi ahna(official) ay weydiisato soomaaliweyn oo dhan. Keddibna la cafiyo.
- Soo celinta hantida maguuraanka ah ee soomaaliweyn (dadweyne & dowladba)
- Is cafin guud iyo mid gaareed oo laba geesood ah(bilateral) oo dhex marta Beelweynta Ha’da iyo Soomaaliweyn. Keddibna mid ah beelaha dhexdooda oo dhan.
III - Wejiga Saddexaad
Baaq(qoraal ah) oo ay wadajir u soo saaraan Isimada Beelaha soomaaliyeed oo idil.
Waxaa qodobbada baaqa ka mid noqon kara, matalan(tus.):
- In magac qabiil uu yahay oo keliya ‘Litacaarafuu’, oo aan loo adeegsan karin arrimaha garsoorka, waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, iwm.
- Inaan maamul iyo dawlad lugu dhisi Karin qaab beeleed, iyadoo la adeegsanayo magacyada Ahlu qubuurta lugu abtirsado.
- Inaan gacan ku dhiigle ama jidgooye uusan magangelyo ka helin beeshiisa, ama degaankiisa, diyanna uusan lahayn.
- Inaan dhulka soomaaliya la kala lahayn, oo muwaadinku (somali citizen) uu meeshuu rabo oo bannaan(aan qofi gadan) uu gadan karo – guri ka dhisan karo; beer ka tabcan karo; xoolo ku dhaqan karo; ka shaqaynsan karo; ka ganacsan karo; wax ka baran karo. Iwm.
- Xaaraantimayn in muwaadin soomaaliyeed lagu yiraahdo,’ magaalo,degmo ama gobol hebel waad ku dhalataye, uma dhalan!!)
- In ruux walba uu mas’uul ka yahay falalkiisa (shar & khayrba) oo lugula xisaabtamayo.
IV – Wejiga Afraad
Markii gogosha Soomaaliweyn lasoo gabagabeeyo:
- In isimada, waxgaradka iyo culimada beelaha oo idil, oo ay weheliyaan shacabka Xamar – qaybihiisa kala duwan – ay caasimadda Xamar ka bilaabaan Quraan akhrin, magaalada & intii dhimatay u ducayn iyo Ilaah bari.
- In masaakiinta, maatada iyo danyarta loo loogo xoolo ( digaag, ari, lo’ iyo geel), ay weheliyaan kalluunka noocyadiisa kala duwan – muddo 11 maalmood ah… si shuushka, sharka iyo shaydaanku uga qaxaan Caasimadda.
Haddaba, haddii intaas oo dhan si daacad iyo Alle ka cabsi ah loo sameeyo, maxaa ka dhalan kara oo waxtar ah? Waxtarka ka imaan kara arrintaan,wuxuu Soomaali badankeed ugu muuqdaa inuu leeyahay doc ka yeellooyin (side effects).
Kiniiniga Nabaddu ma laha dhib iyo doc kayeello toona. Laakiin Soomaali fara badan ayaa qabta ama filaysa in waxtarka ka dhalan kara liqidda Kiniiniga uu Wadkood noqonayo!!!
Waxtarradaas aan wejiga la siin karin, waxaa ka mid ah:-
- Waayeelka (adults) soomaalida ayaa wada qaangaar noqon lahaa. Illaa hadda waxaa falalkooda iyo hadalkooda loo saariyaa Ahlu qubuurta.
- Qabqable siyaasadeed, gafane qurbajooje, shisheeye u kalkaale, sharwade shilin bartay,iwm. ayaa hawlgab(pension) noqon lahaa.
- Dulmiwade iyo Danayste isku qariya qabiil, gobol, aqoon sare, Diin, reer galbeed, carab, halgan, muqaawimo, siyaasad ayaa Soomaaliya ka haajiri lahaa.
- Qurbaha oo laga soo wada guuri lahaa.
- Warbaahin-beeleedyada (tribal Media) oo waayi lahaa been, diradiro, shar iyo dulmi ay sheegaan, albaabadana loo laabi lahaa.
- Amxaarada oo shaqo la’aani ku dhici lahayd, kedibna tartiib isaga bixi lahayd. Illayn fadhi uma yaallee…(Haddii Soomaali heshiisoo israacdoo isku bururtoo waddaninimo la wada mirqaanto!!!!!!!!Gaajo, cudur, jahli, abaar iyo shisheeye noocyadiisa kala duwan oo wada socdaa nama haweysan(nuguma dhici) kareen!!!!)
- Ragga ku adeegta inay yihiin afhayeennada, odayaasha iyo nabadoon beeleedyada ayaa Soomaaliweyn is tusi lahayd oo dhuuman lahaa.( Ceebay tacaal baa ka dhici lahayd ama iqariyoo iqari)
- Cid ku soo cararta jagooyinkii markii hore loo dagaalamayey ( af & addinba), sida madaxda sare ee dawladda oo la waayi lahaa. Haddii dibuheshiin dhacdo oo xaqu soo daalaco, ninna ku degdegi mayo jago ama xil lugula xisaabtamayo oo uusan wax gaar ah ka xantoobsan karin.
Ugu dambaystii, waxaan Eebbe ka baryayaa inuu naga dhigo kuwii isturxaan bixiya, tashwiishkana iska saara, si dhab ahna isu cafiya una heshiiya. Xooggeenna, garaadkeenna iyo caqligeennu waxay ku xiran yihiin xubnaheenna oo dib isu wada qabsada. Waxaan waxgaradka Soomaaliyeed si kal iyo lab ah uga codsanayaa inay noqdaan kuwii farriinta maqaalka saxa, wax ka reeba, wax ku dara ama hirgeliya.
Qaybta afraad– Part 4 dhamaad